easter Archives — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော အီစတာပှဲတျော
ကောင်းပြီကျနော်တို့ဒီနှစ်ထိုကာလပတ်လည်. ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်းနှစ်ဦးကြိမ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mom, ရဲ့ဘုရားကျောင်းသွား, ဒါမှမဟုတ်ကောင်းတဲ့အီစတာဝတ်စုံနှင့်အနီးအနားရှိခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအဆောက်အဦမှခေါငျးပျေါမှာသွင်းထား. ငါ y'all အချို့ကိုပြီးသားသင့်ရဲ့အီစတာဝတ်စုံနှင့်စားဆင်ယင်ထွက်ကောက်ယူကြပါပြီသိ.
ဒါဟာပွဲတော်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြာလူတိုင်းရရှိသွားတဲ့ပုံရသည်. ခရစ္စမတ်နဲ့အီစတာများသောအားဖြင့်ယေရှုအကြောင်းဂရုမစိုက်ပါဘူးတဲ့သူကိုတောင်လူတချို့လမ်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရလာသောအခါယခုနှစ်သူတို့အားစိတ်ဝင်စားစရာကြိမ်များမှာ. ရောင်းမည်အီစတာကြက်ဥနှင့်အီစတာသကြားလုံးနေရာတိုင်းရှိတယ်. အီစတာအစီအစဉ်များရှိပါတယ်, နှင့်စစ်ရေးပြ. အီစတာနည်းနည်းကျော်ကြာ, လူအများအီစတာပုံပြင်ထဲမှာမယုံကြည်ကြဘူးသော်လည်း.
အီစတာနှင့်ခရစ္စမတ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်များဖြစ်လာကြပြီဒါဟာသော်လည်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ကအမျိုးသားရေးအားလပ်ရက်ထက်အနည်းငယ်ပိုသို့လှည့်ပါတယ်, မိသားစုပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲ, လက်လီအရောင်းဆိုင်များအချို့သောပိုပြီးငွေရှာဖို့အဘို့နှင့်အခွင့်အလမ်းများ. ဒါပေါ့, ခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်း၌ယုံကြည်သောသူတို့အကြောင်းဆင်နွှဲ, ဒါပေမယ့်မလိုအပ်င်.
ငါသည်ငါ့မိသားစုအီစတာပေါင်းသည်တလုံးမှထွက်သွားလိမ့်တက်ကြီးထွားလာသတိရ. ကျနော်တို့ရက်သတ္တပတ်ရှေ့တော်၌ထိုကုန်တိုက်ကိုသွားနှင့်အီစတာ Bunny နှင့်အတူရုပ်ပုံယူချင်ပါတယ်. ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသောသူအပေါင်းတို့သည်အားလပ်ရက် mascots ၏ creepiest ဖြစ်ပါတယ်ထင်. တစ်ဦးကအလွန်ကြီးမားသော…